October 10, 2019 - Myitter
October 10, 2019 Myitter 0
ဒေသအများစု မိုးရွာနိုင်ပြီး မိုးကြိုးနှင့် လေပြင်း သတိပြုရန် ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေး
ဒေသအများစု မိုးရွာနိုင်ပြီး မိုးကြိုးနှင့် လေပြင်း သတိပြုရန် ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေး မိုးလွန်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအများအပြား တွင် နေရာကွက် မိုးကောင်းနေ ကာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝက် လက်မြို့၌ မိုးကြိုးထိမှန်၍ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးပြီး သုံးဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလဆန်းက စတင်သော မိုးလွန်ကာလတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ […]
ကျန်နေသေးတဲ့တရားခံတွေကို ဖမ်းမိဖို့ ညီမပြန်လာပေးပါ
ကျန်နေသေးတဲ့တရားခံတွေကို ဖမ်းမိဖို့ ညီမပြန်လာပေးပါ တကယ်ပဲ သေသွားပြီလား..မသေသေးပဲနဲ့ ပြန်လာပေးပါ ပြန်လာပြီး ညီမကို ဘယ်သူတွေ အကောက်ကြံခဲ့လဲဆိုတာကို ပြောပြပါ။ တချို့လူတွေက ညီမကို ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ချုံထဲမှာ ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။အဲ့တာတွေက်ု မဟုတ်ဘူးလို့ ညီမ ပြန်လာပြီးပြောပေးပါ ။ အဲ့နေ့တုန်းက တရားခံက ကူပါကယ်ပါဆ်ုပြီး အကူညီတောင်းလ်ု့ […]
အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးချစ်တိုးနဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းခိုင်တို့ကို အောက်တိုဘာ ၉ ရက်က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်မှာ စတင် တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါအရာရှိ နှစ်ဦးပေါင်း ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ လောက်ကို အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး အဂတိလိုက်စားမှုကျူးလွန်သည်ဟုဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး […]
ပြင်ဦးလွင်မြို့က မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဖူးမြော်ဖူးကြမှာပါ….မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားကို ပြည်ချစ်ဘုရားလို့လည်း သိကြပါတယ်…တရုတ်ပြည်ကို ပင့်ဆောင်ခေါ်ယူစဉ်မှာ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ပွဲကောက်ရေတံခွန်အရောက် မော်တော်ယာဉ်တိမ်းမှောက်ပြီး ဘယ်လိုမှ ဆက်လက်ပင့်ဆောင်လို့မရတော့လို့ အဲဒီနေရာမှာပဲ တည်ထားပူဇော်ခဲ့ရာကနေ ပြည်ချစ်ဘုရားလို့ ဘွဲ့တော်တွင်ခဲ့တာပါ….. မဟာအံ့ထူးကံသာ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကြီးခုလည်းပဲ ပြင်ဦးလွင်မြို့က ပြည်ချစ်ဘုရားလို အဖြစ်အပျက်မျိုး နောက်ထပ် ဘုရားတစ်ဆူ ပေါ်ထွန်းလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. […]
လတ်တလော အနုပညာလောကသာမက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ နာမည်ကြီးသွားတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ ဆေးအမှု့နဲ့ ဖမ်းဆီခံခဲ့ရတဲ့ သတင်းကို ပရိသတ်တွေ သိလောက်မယ် ထင်ပါတယ်။ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ ဘန်ကောက်မှဝယ်လာတဲ့ ပူရှိန်းသကြားလုံးဘူးကို မှုးယစ်ဆေးလို့ ယူဆပြီး ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးကို မြန်မာပလာဇာ မှာ […]
ခုပဲ သင့် ရဲ့ ညာလက်ဖဝါး ကို ဖြန့်ကြည့် လိုက်ရအောင်.. နံပါ တ် ဘယ်လောက်လဲ..?
ခု ပဲ ညာလက္ဖဝါးနဲ့ အျေဖရွာရေအာင်ကိုယ့် ရဲ့လက္ဖဝါးကို ကြည့်ပြီး ဘယ္လိုလူမ်ိုျးဖစ္မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရေအာင်နော်။ ၀၁. ရည်ြရယ္ခ်က်ကြီးမားသောသူ၊ ခေါင်းမာသောသူရည်ြရယ္ခ်က်ကြီးမားပြီး ပညာရွင္တစ်ယောက္ကို လေးစားအားကိုးခံရမည့်သူပါ။ မမွားကိုနည်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ပြီး ဆုံျးဖတ္ခ်က်တြေက အျမဲတမ်းမွန္ကန်နေမွာပါ။ ဒါပင္မဲ့ နည်းနည်းခေါင်းမာသျူဖစ်ပြီး အမ်ားအတြက္ထက် ကိုယ့်အတြက္ကို ကြည့်ပြီး အလုပ္လုပ္တတ်သျူဖစ္ပါလိမ့္မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတြက္ထက် […]
ဗဟန်းရဲမှူးကလည်း မှန်ကန် ဖြောင့်မတ်တဲ့အထဲ ပါတယ်ဗျ။ မူးယစ်ဆေးဝါး မဟုတ်ဘူးလို့ သူယူဆတယ်။ ဒါပေမယ့် မူးယစ်အထူးက ဖမ်းလာတာ ဖြစ်တော့ သူ့တာဝန်က (၁) အမှုဖွင့်ပေးရမယ်။ (၂) ရမန်ယူပေးရမယ်(၃) မူးယစ်ဆေးဝါး ဟုတ်မဟုတ် သူ့သဘောနဲ့သူ ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘူး ဟုတ်မဟုတ် အတည်ပြုဖို့ ဓါတုဗေဒ စစ်ဆေးချက် တောင်းရမယ်။ […]